Taalibaan iyo dhinacyada kalle ee siyaasada Afgaanistaan oo heshiis nabadeed gaaray – Radio Daljir
Luulyo 9, 2019 7:21 b 0
Wadahadal nabadeed oo laba maalmood ah oo ay ka qaybgaleen wafuud katirsan dowladda Afgaanistaan, wakiilo ka socda Taalibaan iyo ururada bulshada rayidka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Dooxa ee dalka Qatar, waxaana dhinacyadu isku raacay in khasaaraha dhimashada ee shacabka in meesha laga saaro.
Kulankaan ayaa loogu magacdaray wahadalka gudaha ee Reer Afgaanistaan, waxaana maalgeliyay Qatar iyo Germany, siyaasiyiin Afgaanistaan katursan, ururarada bulshada oo ay ku jiraan haweenka iyo wakiilo kasocda Taalibaan ayaa goob joog u noqday.
“Waxaa naga go’an in aan tixgelino sharafta dadka Afgaanka, noloshooda iyo hantidooda, waxaana sidoo kalle la joojiyay khasaaraha shacabka” ayaa lagu yiri qoraal si wadajir ah looga soo saaray wadahadalada Dooxa.
Heshiiska ayaa sidoo kalle damaanad qaaday ammaanka goobaha ammaanka iyo xarumaha adeegga bulshada.
Qari Din Mohammad Hanif oo ah xubin katirsan ergooyinka Taalibaan ayaa sheegay wakiilada ka socda dowladda oo shirka joogay inay kala heshiiyeen inaan la bartilmaameedsan dadka shacabka oo la ilaaliyo, taasi oo yiri inay ahayd waxa ay doonayeen.
Heshiiskan ayaa kusoo beegmay maalin kadib ku dhowaad 18 qof markii lagu dilay weerar qarax gaari oo kadhacay Afgaanistaan, 180- qof ayaana ku dhaawacmay weerarkaasi oo ay ku jiraan carruuro , waxaana uu ahaa weerarkii ugu dhiig qubashada badnaa tan iyo sanadkii 2001dii xiligaasi oo awoodda laga tuuray.
Madaxa wadaxaajoodyada Afgaanistaan ayaa difaacay weerarkaasi, isagoona ku tilmaamay inuu ahaa weerar xornimo doon ah.